I-X XUMUMX powder (147-1146963-51) | i-neuroprotective ne-neurotrophic compound
/ Imikhiqizo / I-Nootropics powder / J 147 impuphu
Isilinganiselwa: SKU: 1146963-51-0. Isigaba: I-Nootropics powder
I-AASraw inokukwazi ukuqala nokukwazi ukukhiqiza kusuka kugremu kuya ku-oda elincane le-J 147 powder (i-1146963-51-0), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-J147 powder laqala ukuthuthukiswa ku-2011, futhi abacwaningi benze izifundo eziningana ezibonisa ukuthi zingakwazi ukuguqula ukulahlekelwa kwememori futhi zihambe kancane noma ziguqule ama-Alzheimer kumagundane. Kodwa kuze kube lolu cwaningo, babengazi ukuthi lisebenza kanjani ngaphakathi kwamaseli. Baye bakwazi ukukhombisa ukuthi i-J147 powder isebenza ngokuphatha i-ATP, iphrotheni e-mitochondria nomthombo wamandla omzimba womzimba. Lapho i-J147 powder ikhona, ama-neurons avikelwe ezidakamizweni ezihlobene nokuguga. Ukuhlolwa okungeziwe kubonise ukuthi i-J147 powder yandisa amazinga we-ATP futhi ikhuthaza imithichondria enempilo, eqinile
Ividiyo ye-J 147 powder
Ama-Raw J 147 powder abalingiswa abayisisekelo
Ifomula Yamamolekhula: C18H17F3N2O2
Isisindo Yamamolekhula: 350.3349896
I-Melt Point: I-177-178 ° C
Umbala: I-white powder noma i-white powder
I-Raw J 147 powder ekuthuthukiseni ukusebenza kobuchopho kanye nomjikelezo owengeziwe wokuthuthukisa
J 147 (1146963-51-0) Isilinganiso sokusetshenziswa
Sisebenzisa uhlelo lokutholwa kwezidakamizwa lwesifo i-Alzheimer's (AD) olususelwa kwizifo eziningi zokuguga, sikhombe inhlanganisela enamandla esebenza kahle kwimemori yamagundane nasezibonelweni zezilwane ze-AD. Njengoba le nhlanganisela, i-J-147 powder, iyi-phenyl hydrazide, bekukhona ukukhathazeka ukuthi ingahle ihlanganiswe ngamakhemikhali / ama-hydrazine anephunga elingaba yi-carcinogenic. Ukuhlola lokhu okungenzeka, sihlolisise ama-metabolites we-J 147 powder kuma-microsomes womuntu namagundane kanye ne-plasma yegundane. Kukhonjiswa ukuthi i-J-147 (1146963-51-0) powder ayihlanganisiwe nama-amine noma ama-hydrazines anephunga, ukuthi iscaffold sizinzile ngokukhethekile, nokuthi ama-metabolites e-oxidative nawo a-neuroprotective. Kuphetha ngokuthi ama-metabolite amakhulu we-J 147 (1146963-51-0) powder angaba nomthelela kuwo umsebenzi wezinto eziphilayo ezilwaneni.
I-J 147, etholakala ku-curryumin yesakhi se-curry spice, inobuthi obuphansi futhi empeleni iguqula umonakalo kuma-neurons ahlobene ne-Alzheimer's.
I-X XUMUMX (i-147-1146963-51) yayiyi-protein e-mitochondrial eyaziwa njenge-ATP synthase, ngokukhethekile i-ATP0A, ingxenye yamaphrotheni. I-ATP synthase ihileleka kwisizukulwane se-ATP, lapho amaseli asebenzisa amandla.
Abacwaningi babonisa ukuthi ngokunciphisa umsebenzi we-ATP synthase, bakwazi ukuvikela amangqamuzana e-neuronal avela ezinobuthi ezinobuthi obuhlobene nokuguga kwengqondo. Esinye isizathu salesi sizathu se-neuroprotective sicatshangwa ukuthi siyingxenye ye-excitotoxicity kumonakalo we-neuronal cell.
I-excitotoxicity yindlela yokwelapha i-neurons eyonakaliswe futhi ibulawe yi-overactivation ye-receptors ye-glutamate ye-neurotransmitter ye-excitatory. Cabanga ukuthi kufana ne-switch switch evuliwe futhi ivaliwe ngokushesha kangangokuthi iphetha ukwenza isibhamu sokukhanya sishaye.
Muva nje, indima ye-ATP synthase inhibition yokuvikela i-neuroprotection ngokumelene nomonakalo we-excitotoxic iboniswe esifundweni segundane . Lolu cwaningo Olwesibili lwakhombisa ukuthi igundane onobuhle esichaza esinjengomuntu ka asabekayo ATPase inhibitory isici 1 (hIF1), okuyinto kubangela okusithiyayo engaguquki ATP synthase, babe eziqinile ekufeni neuronal ngemva umonakalo excitotoxic. Le datha okuhambisana nale J 147 powder isifundo esisha, lapho likhuluma ngokwanda kwabantu abathola IF1 e amagundane encishisiwe umsebenzi ATP synthase (ngokuqondile ATP5A) futhi neuroprotective.
Isexwayiso ku-Raw J 147 powder
Idatha ekhonjisiwe lapha ikhombisa ukuthi i-J-147 powder inamandla okukhulula ukulahlekelwa kwengqondo lapho ilawulwa ngesigaba sekwephuzile lesi sifo. Ikhono le-J-147 powder ukuthuthukisa inkumbulo kumagundane ase-AD asebekhulile ihambisana nokufakwa kwayo kwezici ze-neurotrophic NGF (i-nerve growth factor) ne-BDNF (ubuchopho obuthathwa nge-neurotrophic factor) kanye namaphrotheni amaningi aphendulayo e-BDNF abalulekile ekufundeni kanye nenkumbulo. Ukuqhathaniswa phakathi kwe-J-147 (1146963-51-0) powder kanye ne-factpezil emodeli ye-scopolamine kubonise ukuthi ngenkathi zombili izinhlanganisela zingalinganiswa ekukhululeni imemori yesikhashana, i-J-147 powder yayinamandla ekukhululeni imemori yendawo kanye nokuhlanganiswa kwalaba ababili basebenza engcono kakhulu kwimemori yenkambinkimbi kanye nekhamishi.
Isifo se-Alzheimer isifo esiqhubekayo sobuchopho, esanda kubhekwa njengesiyimbangela yesithathu yokufa e-United States futhi sithinta abantu baseMelika abangaphezu kwezigidi ezinhlanu. Futhi kuyimbangela ejwayelekile kunazo zonke yokukhulelwa komqondo kubantu abadala asebekhulile, ngokusho kwamaNational Institutes of Health. Nakuba izidakamizwa eziningi ezakhiwe eminyakeni eyedlule ye-20 zibhekiswe ku-playard yamyloid ephosheni (okuyisigqabhezana lesi sifo), bambalwa abaye baphenyiswa ngempumelelo emtholampilo.
"Nakuba izidakamizwa eziningi ezakhiwe eminyakeni eyedlule ye-20 zibhekiswe ekutheni i-amyloid plaque ebuchosheni (okuyisigqabhezana lesi sifo), akekho okuqinisekisiwe okuphumelelayo emtholampilo," kusho uSpubbert, umlobi omkhulu wesifundo.
Eminyakeni embalwa eyedlule, u-Schubert kanye nozakwabo baqala ukusondela ekwelapheni kwesifo kusuka ekhoneni elisha. Esikhundleni sokukhomba i-amyloid, lebhu inqume ukungena kulesi sici esiyinhloko engozini yokugula. Ukusebenzisa izikrini ezisuselwe esitokisini ngokubhekela ubuchopho obuhlobene nobudala obuhlobene nobudala, zenze i powder J 147 (1146963-51-0).
Phambilini, ithimba lathola ukuthi i-J-147 powder ingavimbela futhi iguqule nokulahleka kwememori kanye ne-Alzheimer's pathology kumagundane anohlobo lwefomu elizuzwe njengefa I-Alzheimer's, imodeli yegundane esetshenziswa kakhulu. Kodwa-ke, leli fomu lesifo liqukethe kuphela iphesenti elilodwa lamacala e-Alzheimer's. Kubo bonke abanye abantu, ukuguga kuyisici esiyingozi esiyinhloko, kusho uSchubert. Ithimba lalifuna ukuhlola imiphumela yalowo ozobhapathizwa ngezidakamizwa ohlotsheni lwamagundane aneminyaka yobudala ngokushesha futhi abhekane nengqondo yokuwohloka komqondo ecishe ifane kakhulu nenkinga yomuntu ehlobene nobudala.
I-X XUMUMX Powder Raw
Ukudayiswa kwe-Raw J 147 powder
Indlela yokuthenga i-J 147 powder kusuka ku-AASraw